एक हैकर जस्तै सोच्नुहोस्! - सिल्टल विशेषज्ञले तपाईंको वेबसाइट कसरी सुरक्षित गर्ने बताउँछ
वेबसाइट को बारे मा समाचार हैकिंग हरेक दिन को सबै खबर हो। लाखौं डेटा समाप्त भयोहैकरहरूको हातमा जो डाटा सम्झौता गर्छन, उपभोक्ता जानकारी चोरी गर्नुहोस् र अन्य बहुमूल्य डेटा चोरी गर्न कहिलेकाहीँ पहिचान चोरीमा। यो होअझै धेरै अज्ञात वेबसाइट ह्याकरहरू कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँच सञ्चालन गर्छन्।
जैक मिलर, विशेषज्ञ सेमील्ट ,तपाइँलाई आक्रमण गर्न को लागी ह्याकिंग सम्बन्धी सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी लाई मिलाईयो।
बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि वेबसाईट हैकरहरूले निर्माणको बारेमा जान्दछन्वेब विकासकर्ताहरू भन्दा बढी साइट गर्छ। तिनीहरू राम्रो तरिकाले सञ्जालको दो-मार्ग ट्राफिकलाई बुझ्दछन् जसले प्रयोगकर्तालाई डेटा पठाउन र प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छसर्भरबाट अनुरोधमा।
प्रोग्रामहरू र वेबसाइटहरूको इजाजतपत्र प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरु जुन खातामा लिन्छडेटा पठाउन र प्राप्त गर्न आवश्यक छ। वेब हैकरहरू जान्दछन् कि वेब विकासकर्ताहरूले अनलाइन रिटेलरहरूको लागि वेबसाइटहरू सिर्जना गर्छन्खरीदारी कार्टमा राख्नु भएपछि उत्पादनको भुक्तानी। वेब विकासकर्ताले कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा, तिनीहरूका ग्राहकहरूसँग घृणा गरिन्छर वेबसाइट हैकर्स द्वारा कोड इन्फल्ट्रेशन को खतरे को बारे मा सोचना विफल।
हेलिकप्टरहरू कसरी काम गर्छन्?
वेबसाइट हैकरहरूले बुझ्दछन् कि साइटहरू प्रोग्रामहरू मार्फत काम गर्न चाहन्छन्सूचना र सफलतापूर्वक डेटा पठाउने प्रक्रिया प्राप्त गर्नु अघि प्रमाणिकरण गरौं। कार्यक्रममा अवैध आगत डेटा, खराब इनपुट भनिन्छप्रमाणीकरण, हैकिंग पछि प्राथमिक ज्ञान हो। यो आगत हुन्छ जब आगत डेटाले अनुसार आशा मेल खाँदैनविकासकर्ताको डिजाइन कोड।.वेबसाइट ह्याकरहरूको समुदायले कार्यक्रमहरूमा अमान्य इनपुट प्रदान गर्न थुप्रै तरिकाहरू प्रयोग गर्दछनिम्न विधिहरू।
मौन आक्रमणको रूपमा पनि जानिन्छ, प्याकेट सम्पादनमा डेटाको हमला समावेश गर्दछट्रान्जिट। डेटा विनिमयको समयमा प्रयोगकर्ता न त वेबसाइट व्यवस्थापकले आक्रमणको अनुभव गर्दैन। प्रयोगकर्ता पठाउने प्रक्रियामाप्रशासकबाट डेटाको लागि अनुरोध, वेब हैकरहरूले प्रयोगकर्ता वा सर्भरबाट डेटालाई अनधिकृत अधिकार प्राप्त गर्न सम्पादन गर्न सक्छन्। पैकेटसम्पादनलाई मध्य आक्रमणमा पनि मानिस भनिन्छ।
क्रस साइट हमला
कहिलेकाहिँ वेबसाइट ह्याकरहरूले प्रयोगकर्ता PC लाई दुर्भावनापूर्ण भण्डारण गरेर पहुँच पाउँदछविश्वसनीय सर्भरहरूमा कोडहरू। दुर्भावनापूर्ण कोडले प्रयोगकर्तालाई संक्रमण गर्दछ जब कन्टर्ड्समा क्लिक गरेर आदेश PC मा आदेशहरू आमन्त्रित गरिन्छफाइलहरूमा डाउनलोड केही सामान्य क्रस साइटहरूमा क्रस साइट अनुरोध बिग्रेसन र क्रस-साइट स्क्रिप्ट समावेश गर्दछ।
वेबसाइट हैकरहरूले आक्रमण गर्न सक्ने सबैभन्दा विनाशकारी हैकिंग मध्ये एक सञ्चालन गर्न सक्दछसर्भरमा आक्रमण गर्न सर्भर। हैकरहरूले सर्भरमा एक हानिकारक फेला पार्छ र प्रणालीलाई अपहरण गर्न र प्रशासनिक अधिकारहरू प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्दछफाइल अपलोडको रूपमा। उनीहरूले गम्भीर समस्या पहिचान चोरी र वेबसाइट घाटाको रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
सुरक्षा वेबसाइट वेबसाइट हैकर्स
वेबसाइट विकासकर्ताहरूलाई ह्याकर जस्तै सोच्न आवश्यक छ। ती तरिकाहरू सोच्नु पर्छतिनीहरूको कोडहरू साइट निर्माण गर्दा वेबसाइट हैकरहरू लाई कमजोर छन्। विकासकर्ताहरू कोडहरू सिर्जना गर्दछन् जुन भाग्ने स्रोत स्रोतहरू हटाउँछन्वेबसाइट ह्याकरहरूबाट हानिकारक आदेशहरू प्राप्त गर्नबाट बचाउन विशेष क्यारेक्टरहरू र थप कोडहरू। कार्यक्रमहरूको GET र पोष्ट मापदण्डहरूनिरन्तर निगरानी हुनुपर्छ।
वेब अनुप्रयोग फायरवालले वेबसाइट हैकरहरूको आक्रमणबाट सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ।फायरवालले प्रोग्राम कोड को हेरचाह गर्दा यो हेरफेरबाट सुरक्षित गरेर यो पहुँच अस्वीकार गर्दछ। क्लाउड-आधारित फायरवाल आवेदन भनिन्छक्लाउडट्र परम वेब सुरक्षाका लागि फायरवाल अनुप्रयोग हो।
. - attrezzi per ginnastica